Prapta: Zvese Muhupenyu zviri Pano | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 21, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Yangu yekutanga yakatsigirwa posvo ndeye Prapta, webhusaiti yekudyidzana iyo inoti "Zvese Muhupenyu Zviri Pano!" Vanogona zvakare kuve vekutanga kukwanisa kutora "Zvese muSocial Networking uye Webhu 2.0 iri Pano!" Vanhu ava vanga vakaoma pabasa chokwadi!
Kubva pakuona kwetekinoroji, iyo tekinoroji iri kumashure Prapta hapana chakapotsa pane chinoshamisa. Nzvimbo iyi ndeye 100% Ajax. Foramu, Blogs uye zvimwe zviitiko zvinokomberedza Hupenyu Zviitiko munharaunda Chaizvoizvo kutora inotonhorera pasocial network ... pane kunditi, ini, ini kana iwe, iwe, iwe, Prapta yakanangana nekutenderedza "isu". Ivo vanorongedza zvese ruzivo mune yekushandisa yakatenderedza zviitiko.
Ini ndinotenda yakanangwa zera boka re Prapta angangove vechidiki vakuru (ini ndachembera zvekutadza kunakidzwa nezvimwe zviitiko senge hurukuro yeAbsinthe pazasi! :).
Kune zvakare yakasimba kwazvo injini yekutsvaga iyo inogona kukwikwidza ani online kudanana sevhisi. Fungidzira online kufambidzana kana yaive nemablog, hurukuro, zviitiko zvehupenyu, mameseji chiriporipotyo, majeti uye nhaurirano yepamhepo Prapta! Dai ndaimhanyisa online yekufambidzana sevhisi, ini ndaizotendeseka ndichizunza mumabhuti angu pane mhinduro yakadai.
Zvese zviri mukudzokorora hazvigone kuve zvine mutsindo, hazvo, handiti? Kunyangwe iko kunyorera kwakamhanya kwakachena (kwakanyatsoita - ini ndakanga ndisina kana dambudziko zvachose), ndinofunga pane mukana wakakura wekuvandudza mune aesthetics yekushandisa. IMHO, Webhu 2.0 haingori nezveAjax maficha, iri zvakare pamusoro pekureruka uye nyore kushandisa.
Chiratidzo che Prapta yakapenga uye yakasarudzika. Iyo logo iri zvakare yakatwasuka nepo iyo interface iri yakanyanya yakatwasuka saka inotaridzika kunze kwenzvimbo. Zvese zviri pachiratidziro mono-toni, hapana zviyero, gradients, kana mumvuri. Ndinoona chikamu cheichi chakakonzerwa nekukwanisa kugadzirisa peji asi rinosiya chishandiso padiki padiki (pun yakatarwa).
Ndingadai kuraira yakasimba theming chinongedzo pane iyo yazvino yekugadzirisa sarudzo ... bvumidza vanhu kuti vashandure zvine simba pane kungoita font, saizi-font uye peji mavara. Webhu 2.0 ndeyekuzviratidza - izvi ndizvo zvinoita kuti mamwe ma network enhau afarirwe. Zvakare, kumwe kuiswa kwechikamu kwakazara uye kwete kuyambuka-browser. Semuenzaniso font uye color customization hazvipe kwandiri nenzira kwayo:
Izvo zvakati, ini ndaizofanira kupa Prapta mamakisi epamusoro-soro anogona kupihwa kugona kwechikumbiro uye kwete aesthetics. Ichi chiitiko chinotyisa uye vagadziri vanofanirwa nechikwereti chikuru! Mari yekudyara mune yakajeka graphic muenzi ane ruzivo newebhu kunyorera anoendesa ichi chishandiso mune chakakurumbira uye chakakurumbira. Ini zvechokwadi ndinofunga ndicho chete chikonzero nei ndakanga ndisina kunzwa nezvazvo Prapta pamberi!
Imwe yekupedzisira zano: Iko hakuna chikonzero chekusimudzira mhinduro seAjax kana Webhu 2.0. Vanhu havasi kuzoshandisa yako kunyorera nekuda kwezvikonzero izvi. Kurudzira saiti izvo zvazviri - inonakidza nzvimbo yekugovana zviitiko, kukurukura nezvawo, uye kuwana vamwe!